Alahady 26 Janoary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 26 JANOARY 2020 - ALAHADIN'NY FIRAISAN'NY SAMPANA
« Ary Jesosy naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety Aho; madiova ianao. Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. » (Matio 8:3)
Ny firaisan’ny Sampana dia rafitra manokana eto amin’ny fitandremana izay ivondronan’ny Sampana, Sampan’asa ary Asa miisa 17 ary manana tetikasa miaraka amin’ny Fiangonana. Izany rafitra izany no nanatanteraka ny alahadim-bokany izao Alahady izao, izay alahady fahatelo manaraka ny Epifania sady alahadin’ny marary hoditra. Ny filohan’ny Vondrona Fototra Laika Rajaonarison Rivo no nitarika ny fanompoam-pivavahana, ny filohan’ny Sampana Lehilahy Kristiana Rabezandrina Solohery no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina Filohan’ny Sampana Dorkasy no namaky ny Tenin’Andriamanitra. Ny Filohan’ny AFF Asa Fitoriana ny Filazantsara Andrianary Mbolamasoandro no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny Salamo 66: 8-12 no niarahana namaky teo am-pitsanganana ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra. « Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy, Izay mampioetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Fa efa nizaha tœtra anay Hianao, Andriamanitra ô; efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy. Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Hianao; efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Hianao. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Hianao. »
Noredonina ny hira Ffpm 24: 1 “Ny lanitra ao ambony ao” avy eo.
Tao amin’ny vavaka nataony no nanomezany voninahitra an’Andriamanitra fa mendrika atolotra izany Izy. Tsy mitsaha-maneho ny tana-maherinao mitsotra Ianao, hoy ny mpitarika, fa izay no mbola mahatoy izao anay. Ianao dia mitahiry sy miaro ny Sampana sy Sampan’asa tojo izao fotoana izao. Nisaotra izy noho ny famindram-po sy ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana.
NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA SY VAVAKA FIFONANA
Izany dia nalaina tao amin’ny Jaona 10:14-16 « Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho, dia tahaka ny ahafantaran’ny Ray Ahy sy ny ahafantarako ny Ray; ary Izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. » sy Jaona 10: 25 « Efa nilaza taminareo ihany Aho, nefa tsy mino ianareo; ny asa izay ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no manambara Ahy. » Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika avy eo. Ny hira ao amin’ny Fihirana fanampiny faha-16 : 1,2 “Tsy izany no ilaina” no natao avy eo dia nisy ny vavaka fifonana ary nohiraina ny Hira Ffpm 451 : 1,2 “Tompo ô, tsy takatry ny saiko”
Noraisina tao amin’ny Isaia 43:11 « Izaho dia Izaho ihany no Jehovah Ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy Izaho » sy Hosea 13:5-6 « Izaho dia nahalala anao tany an-efitra, dia tany amin’ny tany mampangetaheta. Araka ny ahitra teny aminy no nahavoky azy; » sy Jeremia 31:3 « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. » izany. Ny hira Ffpm 430: 1,3 “Endrika sariaka” no natao avy eo ary notononina taorian’izay ny fanekem-pinoana Apostolika laharana 1.
Ny Zoky RANDRIAMBELOSON Malalatiana Mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha-6 no nitarika izany ary ny hira 808:1 no nanombohana ny fotoana sy vavaka. Ny Salamo 34:7 « Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy. » no nandraisana ny fampianarana. Andriamanitra dia mamonjy amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny zavatra rehetra raha matahotra Azy
Tantaran’i Bema sy Koto no natolony. I Bema dia notezaina tao amin’ny fianakaviana kristiana, mahalala an’Andriamanitra. I Koto kosa, naman’i Bema dia maditra, tsy miditra am-piangonana. Tanana mafanafana no misy an-dry zareo, matetika misy asan-jiolahy. Mirehareha fatratra anefa i Koto fa tsy mba mahakasika azy ny fanafihan’ny jiolahy izany. Nisy fanafihana ary ka tamin’izany fotoana izany narary ilay alika mpiandry tanana, ny miaramila namita iraka dia tena tsy nisy niaro.
Ny hanatra raisina dia hoe: Andriamanitra ihany no mpiaro azo antoka indrindra manoloana nny loza rehetra. Nanao vavaka izy avy eo
TATITRY NY FIRAISAN’NY SAMPANA :
Ny filohan’ny Firaisan’ny Sampana Ratiarison Joris no nanao izany. Ny Firaisan’ny Sampana dia rafitra hivondronan’ny Sampana rehetra. Izy dia tsy manana asa manokana fa manatanteraka tetikasa miaraka amin’ny Fiangonana. Ny asa niarahana dia :
ny volana oktobra dia nisy ny herinandron’ny Sampana mpitaiza tanora,
tao anatin’ny herinandro sambatra ny 24 desambra dia nanatontosa teatra,
nanatanteraka ny fanavaozana ny trano sekoly teny Ambohidratrimo miaraka amin’ny vaomieran’ny Asa vavolombelona
Nitsangana ny mpikambana rehetra ao anatin’ny SSAA nanao ny hira niraisana: “Tokim-panompoana”. Nisy ny taratasy manome ny torolàlana momba ny fiainan’ny Fiangonana ho an’ny kristiana nozaraina nandritra ny rakitra noraisin’ny loham-pianakaviana rehetra.
Ny Sekreteram-piangonana Rakotomanana Andry no nanambara izany.
Fanasana avy am Sampati Fjkm : Alahady 2 Febroary amin’ny 2 ora sy sasany ao amin’ny Fjkm Analakely.
SPAA 10 Sampana SEekoly Alahady : Fjkm Atsimo Mahamasina: hanatanteraka ny Krismasy faharoa
Katekomena mianatra ny hariva
Misokatra ny fampiratiana tsiahin’ny 50 taonan’ny Hasin’ny famonjena
Hetsika fitoantoka : fitoriana an-tokantrano (édification) Faritra 5 no nanombohana azy. Izay maniry handray ny Mpitandrina sy mpitory dia nampahafantatra izany ary misoratra anarana. Tsy tokony manomana na inona na inona ny tokantrano mandray satria maro ny tokantrano vangiana fa ny fitoriana ny Filazantsara no zava-dehibe.
Fivoriamben’ny Gazety dia amin’ny Sabotsy 1 Febroary amin’ny 10 ora ao amin’ny Akany
Fivoriamben’ny VMFP dia amin’ny Sabotsy 1 Febroary amin’ny 2 ora ao amin’ny Akany
Ny mpianakavin’ny finoana nahazo fanomezam-pahasoavana dia raisin’ny
Vaomieran’ny Fifandraisana anio aorian’ny fanompoam-pivavahana
Izay maniry ny handray ny Mpitandrina miana-draharaha hisakafo ny Alahady antoandro dia milaza.
Fandalinam-pinoana isaky ny zoma faharoan’ny volana dia mitohy ny zoma 14 /02 fanohizana ny fianarana ny bokin’I Jaona
Fitoantoka: raha misy mpianakaviana tena te-hanomana zavatra omena ny mpamangy tokantrano dia atao anaty “sachet” fa tsy afaka mijanona izy ireo satria maro ny tokantrano vangiana.
Ny mpandray maniry hanao Setela dia entanina.
RAKITRA SY FAMAKIANA NY VOADY SY RAKI-PISAORANA:
Razafindrabe John Bam, mpanolo-tsaina ao amin’ny Biraon’ny Fiangonana no namaky izany. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana nanao voady sy raki-pisaorana dia FF 12 , FF 28. Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny hira Ffpm 432 “Mandra-pihavin’ny Tompo”
Ny hira 428 : 1,2 “Reko izao ry Tompo” no natao mialoha ny vavaka.Rabezandriny Solohery Filohan’ny Sampana Lehilahy Kristiana no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Ny vakiteny dia niandraiketan- Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina Filohan’ny Sampana Dorkasy. Ny Perikopa androany dia ny Ezekieka 20 : 30-38 Matio 8 : 1-4 Kolosiana 1 : 24-29. Ny Ffpm 183 : 1, 2 “Midina ry Fanahy o” no natao mialoha ny toriteny .
Ny Matio 8:1-4 no nandraisana ny hafatra, perikopa izay mitarika hifantoka amin’ny lohahevitra hoe « MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA » ka manambara ny nanasitranan’i Jesoa Kristy ilay boka. Mampiseho ny maha Andriamanitra lehibe Azy sy ny maha Mesia Azy ; hahitana koa ny vokatry ny fanatonana an’i Jesoa.
Ny habokana dia areti-mifindra. Hatoka-monina ireo marary azon’izany aretina izany. Raha miditra an-tanàna izy ireny dia asina filazàna dia mihataka ny olona sao hifindran’ny aretina. Jesoa Kristy tsy mba nihataka tamin’ilay boka. Nanatrika ilay boka Izy, onena nahita ny nahazo ilay boka ka nihaino ny fitarainany. Nikasika azy ny Tompo. Tena fanavotana ho an’ilay boka raha nikasika azy ny Tompo satria ny tana-maherin’ny Tompo no nikasika azy.Andriamanitra dia manafaka, manadio, manasitrana. Izany no nasehony tamin’ilay boka.
Nomena antsika koa io Teny io. Mbola te hanamarina, haneho ny tana-maheriny amintsika ny Tompo : te hanadio, hanasitrana, hanafaka antsika i Jesoa Kristy. Izy anefa manaja ny safidintsika, ny famonjena efa vitany teo amin’ny hazo fijaliana fa isika no minia tsy mijery. Ho antsika, ny aretina mahazo antsika dia mety ho fahotana mangeja tsy mety afaka. Mangetaheta fahafahana amin’izay mangeja anao ve ianao ? Jesoa no tonga manafaka.
Eto dia nanatona ny Tompo ilay boka satria nanana finoana izy, ary niankohaka teo amin’i Jesoa Kristy (mariky ny fanetren-tena, fibabohana). Raha manetry tena isika, raha mahafoy ny faharatsiana sy ny fahotana, raha tena vonona isika dia hahita ny tana-maherin’ny Tompo hanafaka, hanadio , hanasitrana. Marina amin’izay rehetra mino Azy Jesoa Kristy. Nijery am-pitiavana ilay boka i Jesoa Kristy, nihaino azy am-pitiavana, nanana fo onena.
Nasain’ny Tompo hiseho teo amin’ny mpisorina ilay boka rehefa sitrana. Dia nasainy nanao fanatitra.Ny fanatitra dia fanajana an’Andriamanitra. Amin’izao fotoana dia ny tenantsika no fanatitra atolotsika an’Andriamanitra. Ho antsika izay efa nandray fanafahana dia tarihan’ny Tompo hanao fanatitra isika. Raha mahatsiaro ny tana-maherin’Andriamanitra isika dia tokony mahatsiaro ny hanao izany fanatitra izany, vonona hijoro vavolombelona haneho ny fitahian’ny Tompo. Eny, ny fanatitra dia fijoroana manao ny asan’ny Tompo.
Raha mahatsiaro notahiana ianao dia midira Sampana hijoroanao vavolombelona. Maro ireo Sampana afaka hidirana ato amin’ny Fiangonana, misy 17 izy ireo. Mazotoa mijoro vavolombelona amin’ny fidirana any amin’ny sampana. Fijoroana atao na amin’ny fiteny, na amin’ny fihetsika, na amin’ny atao. Tian’ny Tompo koa isika hizara izany famonjena izany amin’ny manodidina ka hatomboka ao an-tokatrano aloha. Sitraky ny Tompo izany fizarana izany fa famonjena sy fitiavana izany. Ny fanahy no zava-dehibe indrindra ka mila mizara mba handovàna ny fiainana mandrakizay. Raha voavonjy ianao dia vitanao ve ny hijery fotsiny ireo tsy mbola voavonjy ? Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Porofo ity boka ity;
Koa ampahafantaro ny manodidina ny famonjena vorainao; zanak’Andriamanitra ianao ary hizara izany. Andriamanitra dia fitiavana, mpamindra fo, mpamonjy. Rehefa voavonjy ianao dia ampaherezo ny hafa ary misaora an’Andriamanitra
Taorian’ny toriteny dia ny RFF no nanao ny anjara hirany.
Nisaotra noho ny hafatra voaray ny Mpitandrina Raharijaona. Tsaroanay ny hafatrao, hoy izy, fa mandray ny olona rehetra Ianao fa tsy manavakavaka ary manasitrana ny olona rehetra. Vokatr’izany dia mahazo valiny mahafapo izahay ary mihoatra noho ny angatahinay aza. Sitranao ny aretin-dratsy rehetra. Misy ny voan’ny aretina ara panahy mihitsy aza. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ombay izy ireo. Nentiny am-bavaka ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana, na ny tsy afaka niangona, na ny eto an-toerana na ny any ampita, mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Sampana eto amin’izao Fitandremana izao, mahatsiaro ny Hasin’ny famonjena ao anatin’ny fankalazana ny faha-50 taona hisehoan’ny tana-maherinao. Andriamanitra miasa Ianao, hoy izy. Niavaka izy ho an’ny sahirana, ny traboina, ny voan’ny tsindry hazo lena, ny tsy salama, ny manamanjo, ireo manana hataka manokana rehetra, Ianao hamaly vavaka azy ireny amin’izay fotoana sitrakao, izay manantona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Nentiny am-bavaka ny mpanompo nanao raki-pisaorana sy voady masina rehetra. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Ny hira Ffpm 627 : 1, 3 “Vimbino tsara izahay” no nohiraina mialoha ny fanononana ny tondronzotra sy nanoloraana ny tsodrano. Ny hira Ffpm 351 : 1,2 “ Tsy hangina re ny hoby” no hira farany.
Nisy taorian’ny fanompoam-pivavahana ny fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo.
Rakotoseheno Solofo no niandraikitra ny fafàna, Randriambeloson Sitraka ny fanamafisam-peo. Nitendry orga Rabiazamaholy Hery Lanto notronin’ny mpitendrin’ny SMZM. Ny Vaomiera tompoan’anjara nanaty sy nanisa ny rakitra dia ny Vaomieran’ny Fanana sy Vaomieran’ny Vola, ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy no niandry varavarana.
Naka ny sary : RAHARIJAONA Solofonirina – Nandray an-tsoratra RAJAOFETRA Voahangy sy Seta